Kasuo Ishiguro oo ku guuleeystay biladda Nobeelka ee suugaanta - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Kasuo Ishiguro oo ku guuleeystay biladda Nobeelka ee suugaanta
La daabacay torsdag 5 oktober 2017 kl 12.27
Biladda suugaanta ee Nobelpriset ee 2017.
Qoraaga ingiriiska Kazuo Ishiguro, mar uu shir-jaraa'id ku qabtay gurigiisa oo ku yaala magaalada London. sawir: Alastair Grant
Svenska Akademiens ständige sekreterare Sara Danius tillkännager årets Nobelpris i litteratur i Börssalen i Stockholm.
Gacan yaraha joogtada ee akadeemiyada Sweden Sara Danius oo soo ban-dhigtay qoraaga ku guuleeystay biladda nobeelka suugaanta ee sannadka 2017. sawir: Claudio Bresciani/TT
Kazuo Ishiguro. sawir: Evan Agostini.
Dhowaantan waxa lagu dhawaaqey magaca qofka sanadkan ku guulaystey biladda suugaanta ee Nobelpriset. Kasuo Ishiguro oo u dhashay dalka Ingiriiska.
Biladda suugaanta ee Nobelpriset waxa la bixiyaa sanad kasta laga soo bilaabo sanadkii 1901, marka laga reebo sanaddii 1940:kii ilaa 1943:kii, xilligaas oo hakad la geliyey bixinta biladdan. Asalka biladdan waa dardaarankii ninkii la odhan jiray Alfred Nobel ee Sweden u dhashay oo ku dardaamay in dhaxalkiisa lagu bixiyo abaalmarin sanadle ah oo la siiyo, dadka waxa meel ku´ool ah ku soo kordhiya horumarinta, kimisteriga, fiisikiska, caafimaadka, suugaanta iyo nabadda.
Guddida bixisa biladdan ee Nobel Akademien ayaa ku sababeeyey doorashadooda in Kasou Ishiguro uu buugaag dareen ku dheehan yahay ku sharaxay asalka jiritaankeena iyo hoygeena aduunka.
Kasou Ishiguro waxa uu la hadlay idaacadda BBC sida lagu sheegay qaar badan oo warbaahinta ka mid ah. Ishiguro waxa uu sheegay in la sharfay loona aqoonsaday qof taariikhi ah.
Waxan hada marayaa meeshii ay mareen hal abuuraddii ugu waaweeynaa ee aduunka soo mara, ayuu yidhi Ishiguro oo BBC la hadlay. Aduunku waxa uu ku jiraa xilli aan xasiloonayn, waxan rajeynayaa in dhamaan dadka biladda Nobelpriset helaa ay ka shaqeeyaan wax caalamka wanaag ku soo kordhinaaya, ayuu sheegay Ishiguro sida TV:ga qaranka Sweden faafiyey
Kasou Ishiguro waxa uu ku dhashay waddanka Jaban sannadkii 1954, isaga iyo qooyskiisa ayaa sanadkii 1960 u guuray waddanka Ingiriiska, halkaas oo uu ku dhaqan yahay hada. Ishiguro waa qoraa sheekooyinka allifa, waxaanu allifay tobbaneeyo buug oo caan ah.
Sanadkii 2016 waxa biladdan ku guulaystey ninka heesaaga ah ee mareykanka ah ee lagu magacaabo Bob Dylan. Bob Dylan waxa lagu siiyey biladdan in uu wax badan ku soo kordhiyey fanka iyo suugaanta afka ingiriisiga. Doorashada Dylan waxa ay noqotay mid wax badan laga yidhaahdo sanadkii la soo dhaafay. Sababtuna waxay tahay in Dylan doortay in aanu imanin Sweden si uu u gudoomo biladdiisa, sidoo kalena aanu ka qeeyb qaadan xafladda balaadhan ee lagu maamuuso dadka sanad walba ku guulaysta billahada kala duwan ee Nobel. Dylan waxa uu mudo badan ka aamusnaa in uu ka hadlo in uu gudoomi doona bilada iyo in kale, balse ugu denbeeyntii waa uu aqbalay in uu qaato biladdan.
Dadka biladdan ku guulaystey waxa ay ka kooban yihiin noocyada kala duwan ee hal abuurnimada fanka iyo suugaanta. Badankooda dadkani waa qoraaayo iyo abwaano, balse waxa kale oo ka mid ah, heesaayo iyo noocyada kale ee hal abuurinamda farshaxanka.
111 qof ayaa ilaa hada la gudoonsiiyey biladdan suugaanta ee Nobelpriset. 4 ka mida dadkan ayaa ka soo jeeda qaarada Africa, waxa ka mid ah ninka koonfurta Afrika u dhashay ee la yidhaahdo J. M. Coetzee oo 2003 la gudoonsiiyey biladdan.
Waxa kale oo ka mid ah, Wole Soyinka oo u dhashay waddanka Nigeria oo ahaa qofkii ugu horeeyey ee madow afrikaan ah ee biladdan la gudoonsiiyo sanadkii 1986. Wole Soyinka waxa uu ahaa qoraa caan ah oo hal abuurnimo badan leh, qorayna buugaag badan oo aduunka oo dhan gaadhay. Waddankan Sweden waxa biladdan la siiyey 8 qof oo isugu jira qoraayo iyo abwaano.
Marka laga yimaado bilad sharafta la siinayo Kasuo Ishiguro waxa kale oo la bixinayaa 9 milyan kronor.
torsdag 5 oktober 2017 kl 10.49
Saddex caalim oo si wadajir ah ugu guuleystey Nobel-ka kimikada 2017
onsdag 4 oktober 2017 kl 12.17
Abaalmarinta Nobel ee fisikiska oo 3 caalim ay ku guuleysteen
tisdag 3 oktober 2017 kl 12.27
3 nin oo si wadajira ugu guuleystey Nobelpris-ka caafimaadka
måndag 2 oktober 2017 kl 14.46